Nidaamka daaweynta biyaha brackish (taxane HMJBKRO) - Shiinaha Xi'an Homey Technology
Nidaamka daaweynta biyaha brackish (taxane HMJBKRO)
diidmada cusbo sare brackish dambe nidaamka ingriiska 3000GPD unit waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo biyaha brackish la TDs of 7000ppm heerka soo kabashada A.villa 70%. The conponents ugu muhiimsan ee nidaamka jira filter warbaahinta multi, firfircoonaan filter carbon iyo macaaneeynta biyo brackish unit.With diidmada cusbo sare iyo sonsume tamarta yar, sidoo kale waa loo xirxiro sahlan iyo dayactirka. Shayga waa CE shahaado leh tayo wanaagsan. Hordhac kooban oo ku: 1, isticmaal Dow FILMETEC software design si ay u xisaabiso iyo jilo, ...
Nooca: nidaamka daaweynta biyaha brackish
TDs biyo ceeriin: hoos 15000ppm
TDs biyo soo saarka, wax ka yar 600ppm
Jir: Carbon steel
diidmada cusbo sare ingriiska dambe brackish nidaamka 3000GPD
Cutubkani waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo biyaha brackish la TDs of 7000ppm heerka soo kabashada A.villa 70%. The conponents ugu muhiimsan ee nidaamka jira filter warbaahinta multi, firfircoonaan filter carbon iyo macaaneeynta biyo brackish unit.With diidmada cusbo sare iyo sonsume tamarta yar, sidoo kale waa loo xirxiro sahlan iyo dayactirka. Shayga waa CE shahaado leh tayo wanaagsan.
Hordhac kooban oo:
1, isticmaal software design Dow FILMETEC si ay u xisaabiso iyo jilo, bixinta guidline aragti for design ah
2, design hababka kala duwan sida in ay ku quudiyaan tayada biyaha iyo awoodda loo baahan yahay, taxane B2K waa dabaqi karo biyaha ceeriin la content cusbo 5000ppm-15000ppm. Haddii content cusbo waa ka sii sarreeyaa 15000ppm pls dooran taxane SW for loogu aaso
3, biyo nadiif ah qalab si toos ah bedeli gaar ah si ay ugu bedesho shancosbitaal in xuub biyo cusub marka nidaamka istaago si loo yareeyo wasakhaynta xuub, haddaba sidaas daraaddeed nolosha dheeraan adeega iyo qiimaha hoose.
4, Carbon steel dahaarka leh iyo jir ahama doorashada, giraangiraha dhaqaaqin lagu rakibi karo xaaladda rakibo oo kala duwan
5, ahama iyo SCH80UPVC dhuumaha leh tayo sare leh si loo hubiyo wax ka daadanayaan iyo daxalka yar yahay cadaadis sare
korontada waa 220 / 380V, 50Hz / 60Hz for optional. jir waa bir carbon iyo ahama optional.
HMJBK9RO seires- Si loo daaweeyo biyaha ceeriin la TDs ka yar 9000ppm
HMJBK15RO seires- Si loo daaweeyo biyaha ceeriin la TDs ka yar 15000ppm
1.DOW xuub 4.SS filter 3.sediment weel cadaadis 2.FRP bamka presure sare culus
nidaamka 5.cleaning 6. nidaamka bedelka biyo macaan 7. carbon steel jir dahaarka
8.PLC gacanta si toos ah
QAYBAHA UU KA KOOBANYAHAY OPTIONAL
filter 1.multi-warbaahinta 2.activated filter carbon jir steel 3.stainless
Previous: Nidaamka daaweynta biyaha Standard rô (HMJRO-6000LPH)
Brackish Water Daaweynta